I-M2 iya kwimveliso yeMacBook Pro elandelayo | Ndisuka mac
I-M2 iya kwimveliso yeeMacBook Pros ezilandelayo
UToni Cortes | | Izaziso
Oku akumi. Oomatshini abakhulu be-Apple abayeki nokuba sisembindini wesifo sehlabathi. Sisafumanisa imimangaliso esiyifumana kwiprosesa entsha ye-Apple Silicon M1, kunye ne M2.
Kubonakala ngathi ukuveliswa kobunzima besizukulwana sesibini seeprosesa ze-ARM zeeMacs kuyaqala. Yiyo ke loo nto ngoJulayi eziza kube sele zenziwe, kwaye zikulungele ukuhlangana ngokutsha these Pro ukukhululwa ekwindla. Ke ukuba uyathandabuza umlamu wakho ngesantya seMacBook Pro M1 yakho entsha, ulumke kuba kwiinyanga ezimbalwa anokuthenga athe waxhotyiswa nge-M2 kwaye angakuthandabuza. Yintoni ilaphu.
Ngokwengxelo epapashwe kwi I-Nikkei Asiya, Isizukulwana esilandelayo se-Apple processors, esibizwa ngokuba yi "M2", singene kwisigaba semveliso. Imigca yemveliso yeeprosesa ezinjalo ziyacotha, ke ukuqala imveliso ngoku kuthetha ukuba iichips ziya kufumaneka ngobuninzi ukuze zihlanganiswe ngenyanga ka julio.
Oku kuthetha ukuba bayakubandakanywa kwiimodeli ezintsha zeMacBook ezazisa ekwindla, ngokunokwenzeka kumgca olandelayo ohlaziyiweyo weMacBook Pros, enokubona ukukhanya kwemini Oktobha kulo nyaka.
Uyilo lwe-1-core M8 chip lubonelela ngokusebenza okumangalisayo kunye nobomi bebhetri obukhethekileyo, oboniswe kwi-Apple Silicon MacBooks yokuqala ukuwa okokugqibela. U-Apple usebenzise iprosesa efanayo kwisandula ukubhengezwa iMac y iPad Pro. Nangona kunjalo, i-chip inezithintelo abanye abasebenzisi abaziingcali abalindele ukuba zilungiswe kwisizukulwana sesibini.
I-M1 emfutshane kumazibuko
Le yimizobo yendibano yeeMacBooks ezintsha ezivuze ngoRevil.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, i-chip ye-M1 ixhasa kuphela ubuninzi bamazibuko amabini weendudumo kwaye ivumela umboniso wangaphandle. Umzekelo, ekwindla u-Apple wakhupha i-13-intshi ezimbini-izibuko iThunderbolt MacBook Pro nge-M1 chip, kodwa i-4-port 13-intshi iMacBook Pro ene-Intel processor isathengiswa.
Kwakhona, ngelixa i-chip ye-M1 ibonelela ngokusebenza kakuhle kwamandla kunye namandla okhohlakeleyo, ayigqithisi kwi-Intel Macs ephezulu ngawo onke amabhentshi. Ngokukodwa, imizobo edityanisiweyo ye-M1 chip ayigqibeli ukusebenza kwamakhadi emizobo afakwe kwi-iMacs okanye kwiMacBook Pro ephezulu. Kulindelwe ukuba i-chip ye-M2 (okanye «M1X«) Yongeza ukusebenza kwe-CPU kunye ne-GPU, iibhasi ezininzi zeThunderbolt, kwaye vumela ubuncinci imiboniso emibini yangaphandle.
I-chip ye-M1 ine-CPU ye 8 umphakathi kunye ne-8-core GPU enoyilo lobumbano lwe-RAM. Kunyaka ophelileyo, ibisele ihletywa ngokubonakala kwe-M1 nge 20 umphakathi Ii-CPUs zenzelwe ii-MacBooks eziphezulu. Ii-Macs zeDesktop, ngaphandle kwesidingo seprosesa esebenzayo yamandla, zinokuba noyilo lwe-chip 32 umphakathi.
Kwingxelo yanamhlanje, uNikkei uthi i-M2 iya kuqhubeka nokudibanisa i-CPU, i-GPU, kunye ne-injini ye-neural kwi-chip efanayo. Nangona kunjalo, ayingeni ngakumbi kwiinkcukacha zeprosesa entsha.
I-Apple inamahemuhemu okulungiselela iimodeli ezintsha ze 14 intshi kunye ne-16 intshi iMacBook Pro, Ngeeprosesa ze-ARM kuyilo olutsha lwe-chassis, kunye nokubuya kweMagSafe, umfundi wekhadi le-SD kunye namazibuko e-HDMI.
Konke oku kuye kwaziwa ngumbulelo ku ukugcwalisa yeeplani zeMacBook Pro entsha eyenziwe ngabaSebenzi beRV. Ukuba i-Apple ekugqibeleni ayihlawulanga i-blackmail, sinokwazi nangakumbi. Siza kubona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-M2 iya kwimveliso yeeMacBook Pros ezilandelayo
Zoom yongeza umsebenzi wokujonga ngokuntywila ukwenza iintlanganiso ezonwabisayo ngakumbi
Ividiyo entsha ye-Apple yokuKhuthaza uMxholo we-Apple TV +